Ceeb iyo fashil Madaxtooyada Puntland oo Kulamo Qado & Shaqo Maalmeedkii M/weyne Deni ku sheegtay waxqabad laga sameeyey Boosaaso. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Ceeb iyo fashil Madaxtooyada Puntland oo Kulamo Qado & Shaqo Maalmeedkii M/weyne...
Ceeb iyo fashil Madaxtooyada Puntland oo Kulamo Qado & Shaqo Maalmeedkii M/weyne Deni ku sheegtay waxqabad laga sameeyey Boosaaso.
Garowe (Caasimadatimes)-Madaxtooyada Puntland ayaa xalay baahisay qoraal ay kusoo koobayso 10 qodob oo ay sheegtay in ay yihiin waxqabadkii Madaxweynaha Puntland ka sameeyey gobalka Barri oo uu ku maqnaa wax ka badan 30 maalmood, waxaana qodobada qaarkood si weyn loogu falanqeeyey barta bulshadu ku kulanto ee Facebook-ga.
Qodobada ay baahisay Madaxtooyada Puntland ee waxqabadka ah ayaa kala ah.
Heshiiskii balaarinta garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo, qodobkan dood weyn ayaa ka taagan wax badan oo qarsoon ayaana ku hoos jira, isagoo laga cabsi qabo in uu sabab u noqdo in doodiisu ay noqoto mid hareysa kalfadhiga baarlamaanka ee hadda furmay.
Kormeerka Xarumaha dawladda ee kuyaala magaalada Boosaaso, qodobkan dad badan ayaa rumeysan in uusan aheyn waxqabad ee ay tahay shaqooyinka maalinlaha ahaa ee laga sugayay Madaxweynaha Puntland, haddii laga dhigay waxqabadna ay tahay fariin muujinaysa filashada dawladda laga qabi karro.
Kulankii Madaxweynaha & Bulshada gobalka Barri, kulankan ayaa ahaa mid taageero Madaxweynuhu uga raadinayay bulshada gobalkaas, inkastoo habeenkaas uu jeediyey khudbad dheer, haddana wuxuu kamid ahaa kulamada caadiga ah ee uu maalin kasta ka qeybgalo.
Dhismaha Qeybta Ubadka ee Isbitaalka magaalada Boosaaso, Madaxweynaha ayaa qeybtan booqday wuxuuna amray in la dhiso qeyb cusub, iyadoo aan la dhagax-dhigin sidaas oo kale aan lasoo keeninba halkii laga dhisi lahaa, laakiin Madaxtooyada ayaa waxqabad cusub ka dhigtay shaqo aan la qaban.
Magacaabida maamulka gobalka Barri, tanni waa mid kamid ah arrimaha waajibadka Madaxweynaha Puntland, waana ku qasbanaaday in uu sameeyo Isbedel maamulka gobalka ah, haddana Madaxtooyada ayaa ka mid dhigtay qodobadii waxqabadkeeda.
Bilowga Dayactirka jidka Boosaaso & Garoowe, qodobkani ma jirto wax laga qabtay ilaa hadda, marka laga reebo arrimaha balan-qaadyada lamana bilaabin shaqadii oo horey Madaxtooyadu u sheegtay in 30 maalmood gudahood lagu bilaabi doono.
Kulamadii Isimadda,ganacsatada iyo Haweenka gobalka Barri & Madaxweynaha Puntland ayaa kamid ah qodobada waxqabadka lasoo bandhigay, balse tanni waxay la mid tahay kulankii Madaxweynuhu bulshada gobalkaas la qaadan jiray mar kasta oo uu deegaan booqdo mana ah waxqabad cusub.
Dayactirka garoonka ciyaaraha ee magaalada Boosaaso ayaa kamid ah waxqabadka la shaaciyey, ma jirto wax shaqo ah oo la bilaabay Ciyaar lasoo xirayay ayuu ka qeybgalay Madaxweyne Deni maalmihii dhamaadkiisa safarka Boosaaso, wuxuuna balan-qaaday aduun lacageed, balse ma jirto shaqo bilaabatay oo la dhagax-dhigay ama xariga laga jaray.
Qodobada ay waxqabadka ka dhigtay Madaxtooyada Puntland ayaa u muuqda kuwa aan dhameys aheyn, waana mid kamid ah dacaayaadkii horey loogu yaqaanay Madaxtooyada Soomaaliya oo ay horey u ogaatay Warsidaha PuntlandTimes in ay soo min-guurisay Madaxtooyada Puntland.
Previous articleMaxaa saaka ka socda Dhuusamareeb Xilibaano ku qulqulaya & walaac laga muujiyey Gudiga dowladdu magacwday.
Next articleWarbaahinta Madaxa banaan ee Puntland oo loo diiday ine soo tebiyaan kal fadhiga Barlamaanka Puntland xalad cakiran oo ka taagan Hoolka.
Yuusuf Garaad”Madaxweyne Shariif Shiikh Axmed waxaan hadalkiisa u arkaa mid dib...
DEGDEG:Dil arga gax leh oo ka dhacay Gobolka Galgaduud & xiisad...